Tuesday October 23, 2018 - 11:58:46 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa shaqa joojin kujira maalintii labaad gaadiidka dadweynaha ee isaga kala gooshi jiray magaalooyinka W/weyn iyo Afgooye oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
Shaqa joojintan ayaa timid kadib markii maleeshiyaadka dowladda Federaalka gaar ahaan kuwa Melleteriga ay isbaarooyin soo tubeen wadada laamiga ah ayna lacago dheeri ah kusoo rogeen gaadiidka dadweynaha.
Tobaneeyo gaadiid ah ayaa saaka lagu arkayaa iyagoo yaalla bosteejooyinka degmooyinka W/weyn iyo Afgooye, darawallada gaadiidka ayaa warbaahinta u sheegay in wax kabadan 15 isbaaro ay yaallaan inta u dhaxaysa Warmaxan iyo Wanllaweyn ayna ku qasbanaadeen in ay shaqada joojiyaan.
Maamulka DF-ka u qaabilsan degmada Wanlaweyn ayaa isna xaqiijiyay in gabi ahaanba ay xirantay wadada isku xirta degmadaas iyo degmada Afgooye wuxuu eedeyn kulul ujeediyay wasaaradda G/dhigga oo uu sheegay in ay xakameyn waysay maleeshiyaadka mooryaanta ah.
Maxamed Cabdullaahi Cumar oo ku magacaaban guddoomiye ku xigeenka maaliyadda ee degmada Wanlaweyn ayaa warbaahinta u sheegay in baabuurtu aysan isticmaali karin waddo ay yaallaan isbaarooyin isku muuqmuuqda oo ciidamada melleteriga ay soo dhigteen wadada laamiga ah.
"Gaadiidkii isaga kala gooshi jiray Afgooye iyo Wanllaweyn waa istaagay sababtoo ah ciidamada melleteriga ayaa isbaarooyin si taako taako ah usoo dhigtay wadada laamiga ah"ayuu yiri mas'uulka u hadlay maamulka Sh/Hoose ee dhanka DF-ka.
Wasaaradda Gaashaandhigga ayuu ku eedeeyay in aysan waxba ka qaban ballanqaadyadii hore ee ahaa in ay qaadayso ciidamada isbaarooyinka dhigta wadada laamiga ah isagoo xaqiijiyay in wadada isku xirta labada degmo ay isku bedeshay meel shacabka lagu gummaado.
"Wadadaasi shacabka ayaa lagu gumaadaye marka weyba iska joojiyeen in ay maraan, dadka waa la dilaa oo wa la dhacaa, waxaana mararka qaar la kufsadaa haweenka” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Gaadiida isaga kala goosha magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo ayaa sanad ka hor ka wareegsaday isticmaalka wadada laamiga ah waxayna maraan waddo Afgooye uga baxda dhanka degmada Tooratooroow waxayna ugasii dhacaan deegaanka Leego oo uu kajiro maamul islaami ah.
Dhulka ay maamusho Al Shabaab ayaa noqday halka ay ku hirtaan gaadiidka safarka halkaas oo aan laga aqoonin isbaaro iyo xadgudubka ka dhanka ah dadka musaafurka ah.